Rashford iyo Haaland oo hoggaaminaya xiddigaha ugu qaalisa kubadda cagta… (Messi iyo Ronaldo oo ka maqan 20-ka sare, & Vinicius oo noqday xiddiga ugu qiimaha badan Real Madrid) – Gool FM
Rashford iyo Haaland oo hoggaaminaya xiddigaha ugu qaalisa kubadda cagta… (Messi iyo Ronaldo oo ka maqan 20-ka sare, & Vinicius oo noqday xiddiga ugu qiimaha badan Real Madrid)
(Yurub) 23 Maarso 2021. Weeraryahannada kala ah Marcus Rashford iyo Erling Haaland ayaa halka ugu sarreysa ka hoggaaminaya xiddigaha ugu qaalisan kubadda cagta xilligan sida ay daraasad cusub kusoo saartay CIES Football Observatory.
Xiddiga Manchester United oo 23-sano jir ah ayaa lagu qiimeeyay 130 milyan oo gini illaa 172 milyan oo gini, waxaana 14.8% uu ka yahay qiimaha guud ee safka Man United.
Sidoo kale, 20-jirka Borussia Dortmund afka hore kaga ciyaara ayaa isla qiimahaas lagu xardhay magaciisa, balse 21.5% ayuu ka yahay qiimaha guud ee safka Dortmund.
Phil Foden oo 20-jir ah iyo Bukayo Saka oo 19-jir ah ayaa afarta sare ku wehliya weeraryahannada Paris Sait-Germain iyo Atletico Madrid u kala ciyaara ee Kylian Mbappe iyo Joao Felix kuwaasoo ku wada jira qaanadda xiddigaha lagu qiimeeyay 103 milyan oo gini ilaa 130 milyan oo gini.
Liverpool difaaceeda midig ee Trent Alexander-Arnold iyo weeraryahanka Tottenham ee Harry Kane ayaa qiimo ahaan hoos u dhacay, waxayna ku jiraan qaanadda xiddigaha qiimahoodu yahay 77 milyan oo gini illaa 103 milyan oo gini, waxaana qaanaddaas kula jira Chelsea weeraryahankeeda Timo Werner, daafaca bidix ee Bayern Munich, Alphonso Davies, Barcelona khadkeeda dhexe ee Frenkie de Jong, Juventus difaaceeda Matthijs de Ligt iyo laacibka weerarka uga ciyaara Inter Milan ee Lautaro Martinez.
Waxaa xusid mudan in shabakadda ka faaloota qiimeynta lacageed ee kubadda cagta dunida ee CIES ay daraasaddan ku sameysay qiimeynta xiddigaha ugu qiimaha sarreeya kooxahooda, taasoo la micno ah in naadi walba hal xiddig ay kasoo qaateen.
Waxaa intaas u sii dheer, in CIES ay kaliya daraasaddeeda ku koobtay shanta horyaal ee ugu waaweyn qaaradda Yurub oo kala ah English Premier League, Italian Serie A, Spanish La Liga, French Ligue iyo German Bundesliga.
Si kastaba ha ahaatee, sawirka kore ayaad kaga bogan kartaa dhammaan xiddigaha ugu qiimaha badan kooxahooda kubadda cagta, lacagaha ay ku fadhiyaan iyo celceliska boqolleyda hantida ay ka yihiin qiimaha kooxdooda.
Sidaas darteed, Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ayaa ku guuldarreystay inay noqdaan xiddigaha ugu qiimaha badan kooxdooda, taas baddelkeedna kooxaha ay u ciyaaraan ee Barcelona iyo Juventus waxaa ugu qiimo sarreeya xiddigaha ku mideysan qaranka Netherlands ee Frenkie de Jong iyo Matthijs de Ligt.
Sanadaha ka harsan qandaraaskooda, da’da ay jiraan iyo qodobbo kale ayaa go’aaminaya qiimaha xiddigaha marka laga soo tago tayada ay leeyihiin.